Mainz, isixeko kwi Rhineland- Palatinate
Mainz- yiphile! Isixeko saseMainz sidume jikelele apha eGermany kwaye sesinye sezixeko apho iwayini ityalwa khona. Lendawo yaziwa ngokuthanda ulwazi ngempilo emnandi, kunye namasiko akudala. Ayibobume balendawo bodwa apha eEurope obanika amaRoma umdla kwiminyaka engamawaka amabini adlulileyo, ukanti bayebathanda ubuhle bemvelo besisixeko sase Mainz, kunye nomdla kubantu balendawo owabakhumbuza imvelaphi yabo. Konke oku kwawakhuthaza amaRoma ukaba azise abantu balendawo ngewayini.
Abantu besisixeko bayabuthanda ubumnandi kwaye babuvakalisa kubantu bonke abathi bavakashela lendawo nawe uye uzive wamkelekile nokuba kuboniswa ubunganga nobuhle bemidlalo abaye babenayo kwesisixeko. Abantu balendawo bathanda isonka , isausage kunye newayini. Kuye kubekho imidlalo ethi idlalwe kwiindawo ngeendawo apha njengase museum, esinema, kwiitheather, nakwiindawo zomculo. Ukanti lendawo yaseMainz yaziwa kumhlaba jikelele ngonyana wayo odume kumhlaba wonke uJohannes Gutenberg „uyise weMillennium“. Kukwakhona nedama iRhine elineminyaka engamawaka amabini ubudala, liphilela abantu balo kwaye liyathandeka kubatyeleli abasuka kwindawo ngeendawo kwilizwe liphela.
Xa ujonga imvelaphi yesisixeko i Mainz: kwa imvelaphi nesintu samaRoma ukusukela kumawaka amabini eminyaka. Isakhiwo salendawo ukusukela kwakudala sinomtsalane. Izakhiwo ezisezingeni eliphezulu, imifanekiso eqengqiweyo kunye nemizobo yakudala ukanti neecawa zangoku kuleminyaka siphila kuyo. Kukwakhona necawa i St. kaMartin Cathedral enomtsalane ngakwiRhine ukusukela kwiminya eliwaka, ibonisa imvelaphi yomahluko phakathi kweelokishi kanti nee tawuni. Kukwakho necawa yamawisile enesakhiwo esihle kwakulendawo.
Isixeko saseMainz siyalwazi ubhiyozo ngoko abahlali balapha kunye nabatyeleli bayonwaba kakhulu kulendawo. Ngexesha lokubhiyozela iShrovetide, esisixeko sikwidama iRhine sibayindawo yokudibana kubagadi kanti nabanye abantu abazindidi ngeendidi. Amakhulukhulu abantu abathanda lombhiyozo balandela lombiyozo ubizwa ngokuthi yiShrove Monday ezitalatweni okanye kumabonakude. Kodwa iMainz St. Johns Night, eyasoloko ibiyozelwa xakusondele ukuphela kwenyanga kaJuni itsala abatyeleli abaninzi kwesisixeko. Ngomyaka ka 1450 unyana ongusaziwayo walendawo uJohannes Gutenberg enguye owaza nedlela zokuprinta ezintsha uye akhunjulwe ngamaxesha anjena. Imizekeliso yeebhayibhile ezimbini zika Johannes Gutenberg zigcinwe eGutenberg Museum njengezinye zezinto ezenza umdla eluntwini nezifundisa uluntu ngemvelaphi yezizakhono.
Ngaphandle nje kweGutenberg Museum nezindlu zakhona ezakhiwe ngobunene apha eMainz kukwakhona iindawo zokusela iwayini kunye neendawo apho ungathenga khona izinto ozithandayo ezenza umdla kubakhenkethi abatyelela esisixeko abasuka ezizweni. Amawaka abakhenkethi aye avakashele e St. Stephens rhoqo ngonyaka kuba bathanda ukubuka ifesitile zeglasi ezinamabalabala ezazigcotya nguMarc Chagall. Ezifesitile zilithoba zenza lecawe inike umdla imvelaphi yazo isukela kwiTestamente endala kwaye zibonakala njengezona zinto ezabangela udumo luka Marc Chagall.
iMainz le ikwayiyo nendawo yebhola yonyawo. Xa abadlali bebhola yonyawo apha eMainz bedlala akubiyozi bahlali balapha kuphela, ngoko akothusi ukuba kutheni ababadlali bezenzele igama kwelixeshana lingakanana apha eGermany. Esisixeko saseMainz likhaya kwitshanele kamabonakude ebizwa ngokuthi yiZDF, iindidi zosasazo kwiRadio, SWR nezinye indawo zosasazo zifumaneka apha. Ukongeza koku lendawo iyalubhiyozela ugqatso lwayo ngokuba yeyona ndawo yescience nolwazi ulubanzi. Malunga namawaka amathathu anantlanu abantu abafunda kuledyunivesithi ibizwa ngokuthi yi Johannes Gutenberg ikwayeyona inkulu kwesisixeko, zekulandele ikliniki yaledyunivesithi, indawo yolwazi uluphangeleleyo okanye olubanzi kunye nedyunivesithi yescience.
Uninzi lwabantu abafunde ukanti nabasafundayo abahambi kwesisixeko kuba esisixeko lilungu leRhine –Main enye yendawo ezinomnotho apha eGermany. Uninzi lwabaququzeli beenkomfa neendibano ezibalulekileyo baye bagqibele kwelokuba makudityanelwe apha kuba lendawo inkulu kanti neholo eli iRheingold lisezingeni eliphezulu. Kwesisixeko kufumaneka izinto ezininzi kakhulu njengenkathalelo yamasiko, iibhizinisi ezisezingeni eliphezulu, imedia ukanti nesenta enkulu yescience. Esi sisixeko sokuhlala ufunde kwaye usebenze ngoko yiyolonto sinomtsalane eluntwini futhi sibonakala sinekamva eliqaqambileyo.
IiwayiniWineland RheinhesseniRheinland yeyona ndawo inkulu apha eGermany apho kutyalwa khona i wayini iyadi zayo ziyi26,500 ububanzi. Ngaphezulu kwamawaka amathathu anamakhulu amahlanu abantu abatyala iwayini banamakhaya kwiindawo ezilulungeleyo utyalo apha kwi Rhein phakathi kwe Bingen ne Worms, iMainz isembindini wezindawo zimbini. Utshintsho olwenzekileyo kutyalo lwewayini kulendawo lubelukhulu kakhulu kuleminyaka ingamawaka amabini idlulileyo. Ikakhulu abalimi bangoku bewayini indlela abazimisele ngayo ibonisa ukuba kusezakutyalwa iiwayini ezisezingeni eliphezulu kakhulu kwixesha elizayo. Zimbini kwezintathu indawo apho iwayini ityalwa khona apho kukho igrapusi yewayini emhlophe njengezi Riesling, Silvaner, M�llller Thurgau kukwodwa nase Scheurebe kukho indidi ngeendidi kuse Sauvignon Blanc nase Chardonnay. Inye kwezintathu apho kukho khona igrapusi yewayini ebomvu, iDornfelder, Sp�tburgunder kunye nase Portugies ezindawo zihamba phambili kokwa i St. Laurent, Regent, Merlot kunye nase Cabernet Sauvignon nazo ezindawo zenza iwayini esezingeni eliphezulu kakhulu. Eyonanto ibalulekileyo lukhetho lwe Rheinhessen ukusukela kumnyaka ka 1992 nenxa yeewayini ezisezingeni eliphezulu, elingcamlisayo ezenziwe ngemigaqo enonongiweyo. Eyona njongo ibalulekileyo kukwenza iwayini esezingeni eliphakamileyo.ukusukela kumyaka ka 2000 kubekho iqumrhu le Grosse Gew�chse (iwayini emnandi), eliquka iVerband der Pr�dikatsweingg�ter Rheinhessen (VDP). IGrosse Gew�chse isebenzisana ikakhulu ne Riesling kunye ne Sp�tburgunder ukusukela kwindawo eziphezulu. Omabini lamaqumrhu apha eRheinhessen amele iwayini ephezulu nesezingeni eliphakamileyo lwabalimi bewayini.
Kukwakho newayini ebizwa ngokuthi yi (Sparkling Wine) eyenziwe ukusukela kwiminyaka yee1980s. Lewaniyi ibizwa ngokuthi yi Sparkling wine yenziwe ngezakhono ezibizayo zokwenza ishampeyini nangobuchulule. Ngokuzinikela kunye nesibindi iRheinhessen yeyona ndawo inkulu elima iwayini ne Mainz embindini welendawo apha eGermany kwi Rheinland Palatinate.
Asingobatyali bewayini bodwa abanamasiko aphangaleleyo abafumaneka kwesisixeko sisempuma kwi Rhein-Main ukanti nabameli belilizwe njenge Deutsches Weininstitut (DWI). Amasiko nolonwatyelo lwewayini ayizizo zodwa izinto ezisezingeni eliphezulu njengezithethe, kodwa zizinto ezenzeka kubomi bemihla ngemihla, nokuba uyakudibano lokungcamla iwayini njenge Best of Mainz Wine, iMainz Weinb�rse okanye iWine Forum Rheinhessen, okanye rhoqo ngeveki xa uhamba njee ubuka ubuhle bedolophu ngemigqhibelo. Ubuko nje kwiindawo ezindala zesisixeko novakasho kwiindawo ezithengisa iwayini luthembisa ulonwabo. © 2015 Landeshauptstadt Mainz | Startseite | Impressum